Dagaal caawa ka dhacay Muqdisho iyo khasaare ka dhashay.
HomeWararka MaantaDagaal caawa ka dhacay Muqdisho iyo khasaare ka dhashay.
October 5, 2021 Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Wararka ka imaanaya Muqdisho gaar ahaan Halka loo yaqaano isgooska Fagax ee Muqdisho Ayaa sheegaya in Caawa Ciidamo ka wada Tirsan Dowladda Soomaaliya ay Halkaa Ku dagaalameen.
Dagaalka Ayaa ka bilaawday Muran Wiil dhalinyara ah iyo Shaqaale ka Tirsan Maqaaxida dabayare oo caanka ah Halkaasi dhexmaray.
Muranka Ayaa salka ku haayay Wiil Maqaaxida wax ka cunay oo ka dibna Muran galiyay Lacagtii Laga rabay sida ay noo sheegeen dadka Deegaanka, ka dibna waxaa la isku wacday Ciidamo.
Khasaare Ayaa la sheegayaa oo dhaawac u badan in dad shacab oo halkaa Ku sugnaa in dhibaato ay gaartay, Mana jiro wax war ah oo Dowladda Soomaaliya ka dhashay.
Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay cabasho Macalimiinta ay u jeediyeen Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya
Muqdisho caawa waxaa ka jirta internet la”aan xoogan